प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : सरकार बनेन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने कुन धारामा लेखेको छ ? – kalikadainik.com
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : सरकार बनेन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने कुन धारामा लेखेको छ ?
आइतबार, माघ ०४, २०७७ | २०:२०:३४ |
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ भएको हो ।
अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशले अप्सन भयो भने हेर्ने हो कि नहुँदा पनि हेर्ने हो भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । धारा ७६ (३) को अवस्था छैन भने ७६ (२) कै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन र ?प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न थियो ।
सुनुवाईका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले धारा ६ को १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ ले संसदको सरकार बनेन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने कहाँ लेखेको छ र ? भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो।
बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले ‘प्रधानमन्त्रीको पार्टीले सरकार चलाउँदिन भन्न नपाउने ?’ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
अधिवक्ता आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नभएको जिकिर गरेपछि जवाफ दिने क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिप्रश्न गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो– म सरकार चलाउँदिन भन्न पाउँदैन प्रधानमन्त्रीको पार्टीले ? संसदमा बहुमत पाएको दलले सरकार बनाउनु नै पर्ने ? सरकार चलाउन पाउँदिन भन्न नपाउने ? बहसमा सहभागिता जनाउने कानुन व्यवसायीहरूलाई विषयको गाम्भीर्य मनन गरेर बोलिदिन पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले आग्रह गर्नुभयो ।